WARBIXIN: Ku Biirista Alexis Sanchez Ee Man United Oo Hal Dhibaato Ku Keeni Kara Qorshaha Mourinho – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Ku Biirista Alexis Sanchez Ee Man United Oo Hal Dhibaato Ku Keeni Kara Qorshaha Mourinho
WARBIXIN: Ku Biirista Alexis Sanchez Ee Man United Oo Hal Dhibaato Ku Keeni Kara Qorshaha Mourinho
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday hal dhibaato oo ay kooxdiisu wajahayso hadii ay suuqa Janaury la soo saxiixa xiddiga baxsadka ka ah kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez kaas oo la sheegayo in ay haatan iyadu ugu cad-cadahay helitaanka saxiixiisa.
Hadii ay Man United suuqa January iibsato Alexis Sanchez uma baahan doonto in ay xagaaga dambe suuqa kala soo wareegto weeraryahan weyn oo heer caalami ah.
Taas waa fariinta uu Jose Mourinho u diray agaasiaha ciyaaraha ee kooxda Man United ee Ed Woodward.
Tababaraha kooxda Old Traffrod ku ciyaarta ayaa agaasiaha Ed Woodward ku riixaya in uu dhamaystiro heshiiska Alexis Sanchez inkasta oo ay hogaamiyayaasha horyaalka ee Man city ugu cad-cad yihiin 29 jirka reer chile.
Mourinho ayaa doonaya weeraryahan kale oo weyn oo uu ku daro weeraryahanadiisa uu haatan haysto ee Romelu ­Lukaku, Marcus Rashford,Anthony Martial Iyo Zlatan Ibrahimovic
Kadib markii uu Helitaanka Sanchez ku tilmaamay mid cajiib ah Mourinho ayaa isku diyaarinaya in uu Old Trafford kula ciyaaro Stoke City waxana uu ku rajo weyn yahay in heshiiska la dhamaystiro intaaas.
City ayaa sheeganeysa inay bixin doonto ugu badnaan 25 milyan oo euro si u helaan sanchez oo heshiiskiisu dhici doono bisha June Sidoo kale ma rabaan inay bixiyaan wax ka badan 285 kun oo Gini todobaadkii.
United ayaa horay mushahar ugu soo siisay Ibrahimovic lacag dhan 367 kun oo Gin iyo waliba Wayne Rooney oo kooxda ka soo qaadan jiray 300 kun waxa dhibaato kuma ahana in ay Sanchez jeebka ugu shubaan lacag dhan 300 kun oo Gini.
United ayaa sidoo kale lacagahaas horay u soo siisay xiddigaha Eric Cantona iyo Cristiano Ronaldo kuwaas oo ahaa xiddigaha ugu mushaharka badan premier league.
Red Devils ayaa waliba diyaar la ah lacagta Arsenal ay doonayso ee dhan 35 milyan ee euro iyo waliba 5-ta milyan ee wakiilka xiddiga.
Lacagtaas ayaa ah mid ku badan kooxda Man City laakiin ma jirto wax balan ah in uu Sanchez u dhaqaaqi doono Old Trafford inkasta oo uu Jose Rumaysan yahay in ay lacag badan u badbaadin karto Man United xagaaga dambe.